BBC Somali - Maqal iyo Muuqaal - Shuruudaha musharaxa laga rabo
Shuruudaha musharaxa laga rabo
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 2 September, 2012, 16:51 GMT 19:51 SGA
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay shuruudaha looga baahan yahay dadka u tartamaya madaxtinimada Soomaaliya inay soo buuxiyaan. Afhayeenka guddiga doorashada Cismaan Libaax Ibraahim ayaa BBC uga warramay.
Afhayeenka guddiga doorashada, Cismaan Libaax Ibraahim
Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta ansixiyay shuruudaha looga baahan yahay dadka u tartamaya madaxtinimada Soomaaliya inay soo buuxiyaan.
Shuruudaha looga baahan yahay musharaxiinta ayaa ah sidan:
Afhayeenka guddiga doorashada Cismaan Libaax Ibraahim ayaa BBC uga warramay shuruudaha.
Guddiga doorashada baarlamaanka ayaa waxa berri uu bilaabayaa qabashada araajida musharaxiinta, taasi oo socon doonta ilaa Lixda bisha.